इच्छा शक्ति भए विकास सम्भव छ : बाँके क्षेत्र नम्वर ३ ख का प्रदेशसभा उम्मेदवार लक्ष्मीनारायण शाह – Sadarline
लक्ष्मीनारायण शाह कुनै नौलो नाम होइन, विद्यार्थी कालदेखि राजनीतीमा सक्रिय शाह अहिले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट बाँके क्षेत्र नम्वर ३ ख का प्रदेशसभा उम्मेदवार हुन । शाहले आफु निर्वाचित भए त्यसबाट पाउने सरकारी तलव भत्ता नलिने घोषणा गरि सकेका छन् । शाहले तलव भत्ता आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा खर्चिने घोषणा गरेका उनले पैंसा कमाउनका लागि नभएर आप्mनो क्षेत्रको विकास र सम्बृद्धिका लागि उम्मेदवार बनेको बताउने शाहको चुनावी योजनाका बारेमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानी –
तयारी तीब्र छ । विहान ५ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म चुनावी प्रचारप्रसारमै व्यस्त भइयो । आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरुको गुनासा सुन्ने, समस्या पहिचान गर्नेदेखि पार्टीको एजेण्डा र केही स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा गर्नै पर्ने कामहरुको बारेमा उनीहरुसँग छलफल गर्ने काम भयो । निरन्तर भेटघाटले उनीहरुका समस्या बुझने मौका पाइएको छ ।
गिजोल्टिएको राजनीतिमा यो सम्भव छ ?
प्रतिबद्धता गर्दिने तर जितेर गएपछि सबै विर्सन्छन भन्ने मतदाताहरुको गुनासो छ नि ?
मतदाताहरुको गुनासो स्वभाविक हो । घरदैलोका क्रममा पनि मलाई धेरैले त्यही भन्नुभएको छ । तपाईलाई जिताएर पठायौं भने कम्तिमा हामीलाई नर्बिसनुहोला । यसअघिका नेताहरुलाई जितायौं उहाँहरु कहिल्यै फर्किएर आउनु भएन् । हो, म त्यो संस्कार चिर्न चाहान्छु । मुलुक अव संघीय संरचनामा गइसकेको छ । तीन वटा सरकार बन्ने छन् । एउटा स्थानीय, अर्को प्रान्त र केन्द्र । अव पहिले जस्तो हुदैन् । म प्रान्तमा चुनाव लड्दैछु । यहाँका हरेक नागरिकहरुसँगै रहेर काम गर्नेछु । अर्को कुरा म यहिको बासिन्दा हुँ विकास त मेरो लागि पनि हो । पहिले जितेर गएकाले विर्से तर म विर्सने छैन । मैले देशकै नमुना क्षेत्र बनाउनेछु । नेपाली काँग्रेस प्रति मतदाता अत्यन्तै आशाबादी भएको मैले पाएको छु । र मैले पनि जनताको लागि केहि गर्ने अठोटका साथ निर्वाचनमा होमिएको छु ।
अन्त्यमा आम मतदातालाई के भन्नुहुन्छ ?
सदरलाइनडटकम १८ मंसिर, नेपालगन्ज : नेपालगन्जका उद्योगी व्यावसायीहरुले बामगठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजय गराउन अपिल गर्दै नेपालगन्जका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैष्यको अगुवाईमा नेपालगन्जका उद्योगी व्यावसायीहरुको समुहले बाम गठबन्धनका उम्मेदवार बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार पशुपतिदयाल मिश्र, क्षेत्र नं. २ ख का […]
१० फाल्गुन २०७८, मंगलवार १३:१९